मेस्सी र राेनाल्डाे हुँदाहुँदै उत्कृष्ट खेलाडी बन्लान् त इंग्ल्याण्डका कप्तान ह्यारी केन ? « Online Tv Nepal
मेस्सी र राेनाल्डाे हुँदाहुँदै उत्कृष्ट खेलाडी बन्लान् त इंग्ल्याण्डका कप्तान ह्यारी केन ?
Published : 20 June, 2018 1:35 pm
टोटेनह्यामका स्ट्राइकर तथा विश्वकप २०१८ मा इंग्ल्याण्डका कप्तान ह्यारी केनले ट्युनिसियाविरुद्ध २ गोल गरेर पहिलो जित दिलाए । हालसम्म रियल मड्रिडका स्टार स्ट्राइकर क्रिश्टियानो रोनाल्डो र बार्सिलोनाका स्ट्राइकर लिओनेल मेस्सीले बराबर ५-५ पटक बालन डो’र को उपाधि पाएका छन् ।
बालन डो र प्रत्येक वर्ष विश्वकै उत्कृष्ट फुृटबल खेलाडीलाई प्रदान गरिने पुरस्कार हो ।
‘आफूलाइ कुनै पनि सीमाभित्र नराख्नुहोस् । कसैले पनि यस्तो गर्नुहुँदैन ’ , केनले भने । केनले पछिल्ला ४ सिजनमा १३५ गोल गरिसकेका छन् । त्यसमध्येको ४१ गोल गएको उनले सिजनमा टोटनह्यामलाई प्रिमियर लिगमा तेस्रो स्थान दिलाउने क्रममा गरेका हुन् । उनले इंग्ल्याण्डको राष्ट्रिय टिमबाट खेलेको २५ खेलहरुमा जम्मा १५ गोल गरेका छन् ।
उनले विश्वकप २०१८ को इंग्ल्याण्डको पहिलो खेलमै दुई गोल गर्दा एउटा रेकर्ड बनाएका छन् । उनी ग्यारी लिनेकरपछि विश्वकपको एकै खेलमा इंग्ल्याण्डका तर्फबाट दुई गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् । लिनेकरले सन् १९९० मा इटलीविरुद्ध एकै खेलमा इंग्ल्याण्डका तर्फबाट दुई गोल गर्दै या रेकर्ड बनाएका थिए ।
उनको यो रेकर्ड पछिल्लो २८ वर्षमा कसैले भेट्न सकेका थिएनन् ।
अहिलेका बालन डो’र विजेता क्रिश्टियानो रोनाल्डोको रियल मड्रिडका लागि ४३८ खेलमा ४५० गोल गरेमा छन् भने लगातार तीनपटक च्याम्पियन्स लिग पनि जिताएका छन् ।
त्यसै गरी अघिल्लो सिजनका ल लिगा विजेता बासिैलोनाका लागि स्टार स्ट्राइकर मेस्सीले ५५२ गोल गरेका छन् ।
केनले भने, ‘सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हुनका लागि विशाल लक्ष्य लिनुपर्छ । सानो लक्ष्य लिए। हुँदैन ।’
रोनाल्डो र मेस्सी दुवै उत्कृष्ट खेलाडी भएको बताउँदै उनले भने, ‘रोनाल्डो र मेस्सी दुवै उत्कृष्ट खेलाडी हुन्, उनीहरुसँगै उभिनसक्ने बन्नु मेरा लागि चुनौति हो। ’
‘म आफूलाई एउटा मूख्य प्रतियोगितामा प्रमाणित गर्न चाहन्थें । विश्वकै उत्कृष्ट ठाउँमा पुग्ने मेरो लक्ष्य भेट्न मलाई विशाल क्षणहरु तथा मञ्चमा प्रदर्शन गर्नु एकमात्र उपाउ थियो,’केनले भने ।
उनले अगाडि थपे,‘मैले आफ्नो करीयरभरी मैले केही गर्न सक्दिन भन्ने मानिसहरुको सोचलाई ‘म गर्न सक्छु’ भनेर झूटो प्रमाणित गर्नु परेको थियो ।’
एसीसी महिला टी २० च्याम्पियनसिप खेल्न मलेसिया पुगेको नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको लक्ष्य थियो
एसीसी महिला टी-२० च्याम्पियनसिपमा नेपाल सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ । युएईविरुद्ध सेमिफाइनलमा उत्कृष्ट बलिङ गरेपनि वर्षा